Akayingeni eyesinqumo senkantolo - Ilanga News
Home Izindaba Akayingeni eyesinqumo senkantolo
Akayingeni eyesinqumo senkantolo
Uthi wawenza umsebenzi ayewuthunywe nguNkulunkulu
INKOSI yamaQadi, uMqoqi Ngcobo, eyamemezela igama leNkosi yamaNazaretha, uMduduzi Shembe njengomholi, ithi kayingene esinqumweni
senkantolo ngendaba yombango ngoba yona yawenza owayo umsebenzi eyayiwuthu-nywe nguNkulunkulu.
KAYIYINGENI eyokuthi iNkantolo yoMthethosisekelo ikuphikisile ukuthi umholi wamaNazaretha aseBuhleni eMatabetulu, eNdwe-dwe, yiNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, iNkosi yamaQadi, uMqoqi Ngcobo, okuyiyona eyamemezela igama loNyazi emuva ko-kuba kukhothame uyise (woNyazi), iNkosi Vimbeni “Thingolwenko-sazane” Shembe ngo-2011.
Sekuwumlando ukuthi ngoLwe-sibili olwedlule, inkantolo ivumelane nesinqumo sezinkantolo ezi-ntathu; okuyiNkantolo eNkulu ya-seThekwini – ijaji layo, uMnu Achmat Jappie elanquma ngo-Mfumfu (October) 2016 ukuthi impela uThingo lwaqoka ngencwadi iNkosi Vela “Misebeyelanga” Shembe (engasekho) njengomholi oyophatha ibandla mhla lona lu-menyezwa ngoyisemkhulu; yi-Nkantolo eNkulu yaseMgungundlo-vu eyashayela isipikili ngoMbasa (April) 2018, igcizelela isinqumo sikaMnu Jappie neNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala eseBloemfontein.
INkosi iMisebeyelanga yagcina isungule owayo umuzi waseThe-mbezinhle emuva kokuqhubukushwa eBuhleni.
Emuva kokukhothama kwayo, indlu yaseThembezinhle yaqoka umfowabo weMisebeyelanga, iNkosi Phinda “Kukhanyakwe-langa” Shembe njengomholi. INkosi iMisebeyelanga neNkosi uKukhanyakwelanga bazalwa yiNkosi Galilee “iLanga” Shembe engumfowabo kayisemkhulu woNyazi, iNkosi Amos “Nyangaye-zulu” Shembe, eyasungula umuzi waseBuhleni emuva kombango phakathi kwayo nenye indodana yeLanga, iNkosi Londa “Phasha Onjengezulu” Shembe (ongasekho) yona eyasala emzini omkhulu wa-seKuphakameni, eNanda.
Umbango wesihlalo saseBuhleni waqubuka emuva kokuba iNkosi yamaQadi yamemezela igama loNyazi, yathi yatshelwa wuThingo ukuthi yilo oluyohola ibandla.
Emuva kweNkosi yamaQadi kwaqhamuka ummeli woThingo, uMnu Zwelabantu Buthelezi, owamemezela igama leMisebeyelanga eyadlula emhlabeni ngapha-mbi kokuphuma kwesinqumo se-Nkantolo eNkulu yaseMgungundlo-vu.
ILANGA livakashele iNkosi ya-maQadi ngoMgqibelo yalitshela ukuthi indaba yesinqumo senka-ntolo iqala ukusizwa ngaleli phe-phandaba, kodwa akukho okuyi-khathazayo ngaso ngoba yona ya-kwenza ‘eyayikuthunywe nguNkulunkulu’.
“Owami umsebenzi kwawukuthi ngimemezele inkosi, ngakwenza lokho. Uma inkantolo ikuphikisile mina kangisangeni ngoba ngawu-qeda owami umsebenzi,” kusho iNkosi Mqoqi, okuthe uma ibuzwa ukuthi izobamukela yini abendlu yaseThembezinhle ukuba bayo-ngena emzini waseBuhleni, yathi: “Ngiyinkosi yesizwe, ngiphethe bonke abantu, kangikhethi bala lamuntu.
“Uma kunencwadi yenkantolo ethi mabeze la, mina ngizolinda bona njengabantu bandawonye ukuba bazongazisa ukuthi kukhona abaphumayo (eBuhleni) seku-ngena abanye.
“Ngiyobe sengibasikela umngce-le njengokuyalela komthetho wa-maQadi. Konke ngiyokwenza ngokuthula ngoba kangifuni kuchitheke igazi esizweni sami.”
Nokho ibuye yathi kodwa kayazi ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kubekhona incwadi engagunyaza ukuba kuphume umuntu kubo.
“Umuzi waseBuhleni kawufani nemishini yamaRoma yona eya-khiwa yibandla, besekushintsha abefundisi ngokuhlala kuyona.
“Lo muzi ngoweNyangayezulu (iNkosi Amos Shembe), yakhotha-ma yawushiyela uThingolwenkosazane, nalo lwakhothama lwawushiyela uNyazilwezulu,” kusho iNkosi Mqoqi, eyake yakusho lokhu na-ngesikhathi kuqhubeka icala
eNkantolo eNkulu yaseThekwini.
Previous articleUmsolwa ‘ushiswe wafa’ wumphakathi
Next articleBatholwe sebeyizidumbu abebenyamalele